किन लाग्छ हाँसो ? दिमागमा पनि लाग्छ काउकुती ! — Imandarmedia.com
‘एउटा बूढो मान्छे बच्चैमा मरेछ ।’ यो एउटा सरल वाक्य हो तर यो वाक्य पहिलोचोटि सुन्ने प्रायः सबैलाई हाँसो लाग्छ । हाँसो कुनै मानिसको दैनिक जीवनको एक अभिन्न पाटो हो ।
हाँसो एक प्रकारको औषधि हो भन्ने कुरा त हामी सबैले सुन्दै आइरहेकै हौँ । तर चुट्किला सुन्दा वा कुनै अनौठो कुरा देख्दा वा आफैंले भोग्दा हाँसो किन लाग्छ ? हाँसो लाग्नुको वैज्ञानिक कारण, अझ भनौँ मनोवैज्ञानिक कारण के हो त ?
माथिको चुट्किलामा वाक्यको सुरुको अंश भनिरहँदा सुन्ने व्यक्तिको मस्तिष्कमा एक बूढो मानिसको तस्बिर बनिसकेको हुन्छ । तर, चुट्किलाको बाँकी भागमा बूढो मान्छे बच्चैमा मर्छ भनिएको छ जुन आफैंमा नमिल्दो कुरा हो ।
चुट्किला सुन्ने व्यक्तिको मस्तिष्कले त्यो अपेक्षा गरेकै हुँदैन । जब मस्तिष्कले अपेक्षा नगरिएको कुरा सुन्छ वा देख्छ, त्यसले मस्तिष्कलाई एउटै कुरालाई दुई भागबाट विश्लेषण गर्न बाध्य गराउँछ ।
यो भनेको मस्तिष्कलाई एक प्रकारको काउकुती लगाउनुजस्तै हो, जसको कारणले हामीलाई हाँसो उठ्छ । यो सिद्धान्तलाई बेमेलको सिद्धान्त भनिन्छ ।
राहतको सिद्धान्तका अनुसार कुनै दुःखद् घटना घट्न लागेको भान हुँदाको समयमा यदि सो घटना अब नघट्ने भन्ने कुरा थाहा भयो भने र उक्त घटनाको साटो अर्कै घटना घट्यो भने हामीलाई हाँसो लाग्छ ।
उदाहरणको लागि अँध्यारो कोठामा खासखुस आवाज आउँदा डर हुन्छ । तर बत्ती बालेर हेर्दा हावाको कारण प्लास्टिकको झोला हल्लिरहेको देख्दा हामीलाई हाँसो लाग्छ ।
२०७५ असार ३० गते प्रकाशित